3 ပတ်ကျော် အနားယူရတော့မယ့် ရာကီတစ် နဲ့ နံနက်ခင်း သတင်းတိုများ | Football Myanmar
3 ပတ်ကျော် အနားယူရတော့မယ့် ရာကီတစ် နဲ့ နံနက်ခင်း သတင်းတိုများ
November 19, 2018 Adam Willian	44 Comments
* အေစီမီလန် အသင်းဟာ ဒဏ်ရာ ပြသနာတွေ နဲ့ ဆက်တိုက် ကြုံနေရာတာကြောင့် ချဲဆီး ကနေ ထွက်ခွာဖို့ ဟန်ပြင်နေတဲ့ ကွင်းလယ် ကစာသမား ဖာဘရီဂတ်ကို ခေါ်ယူဖို့ အတွက် ကနဦး ဆက်သွယ်မှုတွေ ပြုလုပ် ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ် ၊ သို့သော် သူ့ရဲ့ မြင့်မားတဲ့ လစာ ပမာဏကတော့ အပြောင်းအရွှေ့ ကိစ္စတွေအတွက် အဓိက ဆွေးနွေးရမယ့် အချက် တစ်ချက် ဖြစ်လာဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
* ယူနိုက်တက်ဟာ ရိုးမား အသင်းရဲ့ အသက် 22 နှစ် အရွယ် ကွင်းလယ် ကစားသမားလေး ပယ်လီဂရီနီကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် 26 သန်း ပေးပြီး ခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ အီတလီ သတင်းတွေက ဖော်ပြ နေကြပါတယ်။ ကစားသမား ရဲ့ လက်ရှိ စာချုပ်ဟာ 2022 ခုနှစ် အထိ ရှိနေသေးသော်လဲ ၊ သူ့ရဲ့ လုပ်ခ က တစ်နှစ်မှ ယူရို 1 သန်း သာ ရှိနေတာကြောင့် ၊ အဲဒီ လစာ ပမာဏရဲ့ နှစ်ဆ အထိ တိုးပေးပြီး ခေါ်ယူဖို့ ယူနိုက်တက် ဘက်က ကြိုးစားလာခဲ့ တာပါ။
* ဂါရတ်ဘေးလ် ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို အပေါ် ကျေနပ် အားရခြင်း မရှိခဲ့သည့် နောက်ပိုင်း ၊ ရီးရဲ မက်ဒရစ် အသင်းဟာ ဇန်န၀ါရီ ကာလမှာ တိုက်စစ်မှုး တစ်ဦး ခေါ်ယူဖို့ အတွက် ဈေးကွက်ထဲကို စတင် ၀င်ရောက် လာခဲ့ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်းတွေက ဆိုပါတယ်။
* မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန် နဲ့ ခရိုရေးရှား တို့ ပွဲစဉ်မှာ ပွဲထွက် ကစားသမား စာရင်းမှာ ပါဝင်လာခြင်း မရှိတဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား ဟန်ဒါဆင်ဟာ တံကောက်ကြော ဒဏ်ရာရရှိနေတာ ကြောင့် ၊ ဒဲ့ဖ်နဲ့ အစားထိုး လိုက်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မန်စီးတီး ကစားသမား ဒဲ့ဖ်ဟာ ပွဲအစပိုင်း အမှား လုပ်မိတာက လွဲရင် ၊ ပထမပိုင်းမှာ တော်တော်လေး ခြေစွမ်းပြ ကစားသွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။
* ယူနိုက်တက် နောက်တန်း ကစားသမား နဗီးလ် ကတော့ သူ့ အသင်းဟောင်းက ဒီဂီယာ ရဲ့ နေရာကို ပစ်ဖို့ဒ် နဲ့ အစားထိုးဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှတ်ချက်ပေးဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပေမယ့် ၊ ပစ်ဖို့ဒ်ဟာ ဂိုးသမားကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် ၊ ပီတာ ရှမိုက်ကယ် တို့လို အရှိန် အဟုန် ကြီးမားတဲ့ ဂိုးသမား မဟုတ်သေးဘူးလို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ်။
* ရမ်ဆေးဟာ ဘိုင်ယန် မြူးနစ် ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ပယ်ချပြီး ၊ ဂျူဗီကို ပြောင်းရွှေ့မယ် ဆိုပါက တစ်နှစ်လုပ်ခ ပေါင် 10.4 သန်း ၀န်းကျင် ရရှိဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
* Express သတင်း ဌာန ကတော့ မန်စီးတီး အသင်းဟာ အေဂျက် ကွင်းလယ် ကစားသမားလေး ဒီဂျောင်ကို ခေါ်ယူဖို့ အတွက် ဘာစီလိုနာ ၊ စပါး အသင်းတို့ကို အသာစီး ရယူနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြ သွားခဲ့ ပါတယ်။
* တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တိုက်စစ် အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ချဲဆီးဟာ ဂျီနိုအာ အသင်းရဲ့ ဂိုးသွင်းစက် ပီယာတီကို ဇန်န၀ါရီ ကာလမှာ ခေါ်ယူဖို့ ကနဦး အားထုတ်မှုတွေ ပြုလုပ်လျှက် ရှိနေပါတယ်။
* မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ စပိန် နဲ့ ဘော့စနီးယား တို့ရဲ့ ခြေစမ်းပွဲစဉ်မှာ ၊ ရီးရဲ ကင်းထောက်တွေဟာ ရိုးမား အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှုး ဇက်ကိုရဲ့ ခြေစွမ်းကို စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတယ်လို့ မက်ဒရစ် အခြေစိုက် သတင်းတွေက ထုတ်ဖော် ရေးသား လိုက်ပါတယ်။
* ဒဏ်ရာပြသနာကြောင့် တစ်လနီးပါး အနားယူ ရတော့မယ့် ရီးရဲ မက်ဒရစ် အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား ကက်စမဲရိုးဟာ နိုဝင်ဘာလ 27 ရက်နေ့မှာ ကစားမယ့် ရိုးမား နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်ကိုလဲ ပါဝင် ကစားပေး နိုင်ဖွယ် မရှိပါဘူး။
* ဖီအိုရင်တီးနား အသင်းရဲ့ ကြယ်ပွင့် ကစားသမားလေး ချီစီယာ ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အသင်းထဲမှာ အင်တာ ၊ ဂျူဗီ တို့ အပြင် အင်္ဂလန်က ချဲဆီး နဲ့ လီဗာပူး အသင်းတို့လဲ ပါဝင်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ အီတလီ သတင်းတွေက ဖော်ပြလိုက် ပါတယ်။
* La Repubblica သတင်း မှာတော့ ယူနိုက်တက်ဟာ ကူလီဘယ်လီ အတွက် ယူရို သန်း 90 နဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် ၊ နာပိုလီ ဘက်က ပယ်ချသွားခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကစားသမားဟာ 2023 ခုနှစ် အထိ စာချုပ် သက်တမ်း တိုးထားခဲ့ပေမယ့် ၊ အဲဒီ စာချုပ်မှာ ယူရို သန်း 100 နဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ရှိရင် အသင်းကနေ ထွက်ခွာခွင့် ပေးဖို့ သဘောတူညီချက်ကို ထည့်သွင်းထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
* ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ သူတို့ ရဲ့ ကစားသမား ရာကီတစ် ရဲ့ ဒဏ်ရာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားဝင် ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ရာ ၊ တံကောက်ကြော ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ အတည်ပြုသွားခဲ့ပြီး အနည်းဆုံ3းပတ် နဲ့ အထက် အနားယူ ရတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ခန့်မှန်း နေကြပါတယ်။
* ဘရာဇီး လူငယ် ကစားသမားလေးတွေကို အဓိကထား ခေါ်ယူလျှက် ရှိနေတဲ့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် အသင်းဟာ လက်ရှိမှာလဲ ကိုရင်သီယန် အသင်းက လူငယ် ခြေတက် ကစားသမားလေး ပီဒရင်ဟို ကို ခေါ်ယူဖို့ အတွက် ကနဦး ဆက်သွယ်မှုတွေ စတင် ပြုလုပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
* စပိန် နဲ့ ဘော့စနီးယား တို့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် မတိုင်မီမှာတော့ ၊ စပိန် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်ဟာ မကြာခင်ကမှ လက်ရွေးစင် ကစားသမား ဘ၀ကနေ အနားယူထားခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား ဒေးဗစ် ဆေးဗားကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အခမ်အးနားလေး ကျင်းပ ပေးသွားခဲ့ ပါတယ်။ ဆေးဗားဟာ စပိန် လက်ရွေးစင် အသင်းအတွက် စုစုပေါင်း 125 ပွဲ အထိ ကစားပေးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
* PSG ဥက္ကဌဟောင်း ချာလက် ကတော့ ရီးရဲ မက်ဒရစ်ဟာ အာဆင်နယ် နည်းပြ အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေခဲ့တဲ့ ၀င်းဂါးကို သူတို့ အသင်းဆီ ခေါ်ဆောင်ဖို့ ၊ သူ့ရဲ့ ရှေ့မှာပဲ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုသွားခဲ့ပြီး ၊ ပြင်သစ် သားကြီးက အာဆင်နယ်မှာသာ ဆက်နေဖို့ ဆုံးဖြတ်သွားခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ အင်တာဗျူး တစ်ခုမှာ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ်။
* ကိုင်လီယံ ဘာပေ ကတော့ ဒီနှစ်အတွက် ဘလွန်းဒီအော်ဆု ဟာ ဘယ်သူ ရမလဲ ဆိုတာ မခန့်မှန်း တတ်ပေမယ့် ၊ ပြင်သစ် ကစားသမား တစ်ယောက်ယောက်တော့ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ မှတ်ချက် ပေးသွားခဲ့ ပါတယ်။
Previous Postအာဆင်နယ်သတင်းတိုများNext Postခရိုအေးရှားနဲ့ ပွဲမှာ ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ ပစ်ဖိုဒ့် ရဲ့ ရေဗူး
44 thoughts on “3 ပတ်ကျော် အနားယူရတော့မယ့် ရာကီတစ် နဲ့ နံနက်ခင်း သတင်းတိုများ”
Wonderful read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account. https://918.network/casino-games/73-playboy-casino
✅ FREE DATING SITES ❤ http://sexinyourcity.ml ☜
newest online usa player accepted casinos [url=http://trueonlinecasinos.ooo/]onlinecasinos mozilla[/url] casino on net no download download games of casino
nt keno results online [url=http://trueonlinecasinos.ooo/]virtual bingo machine[/url] virtual casino real money grand virtual online casino
gambling rated site top [url=http://trueonlinecasinos.ooo/]keno live online bc[/url] best online casino for canadians the best online casino sites
live casino slot games [url=http://neoonlinecasino.com/]on line casino directory[/url] online gambling offers online roulette com
platinum play casino mac osx [url=http://wowcasinoonline.ooo/]on line craps games[/url] casino virtual linea brand new online casinos
legit us online casinos [url=http://onlinecasinoside.ooo/]us online sports betting[/url] pennsylvania jail time for online gambling best casino downloads
us ewallet account online casino [url=http://spaceonlinecasino.com/]roulette casinos live[/url] keno electronics washington online casinos accepting us
online casino accepting pay pal [url=http://onlinecasinoside.ooo/]us gambling on iphone[/url] internet gambling brazil best us gambling
the best online roulette [url=http://neoonlinecasino.com/]is online gambling lega in utah[/url] best playtech online casino download casino game for mac
casino que acepta paypal [url=http://trueonlinecasinos.ooo/]high stakes live roulette[/url] online casino located in the united states best casino game for android tablet
real slot games online [url=http://spaceonlinecasino.com/]online bingo sites with signup bonus[/url] play 21 online for money online gambling website
online gambling new jersey [url=http://onlinecasinoside.ooo/]best online blackjack for mac[/url] gambling internet machine slot real online casino real money
playing slots [url=http://neoonlinecasino.com/]best casino sites uk[/url] real live online casinos bingo bonus on slots
virtual casino pc [url=http://onlinecasinoside.ooo/]online gambling iphone[/url] bank transfer or casino credit online best playing slots
Good day I am so glad I found your weblog, I really found you by accident, while I was researching on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thank you foratremendous post andaall round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to readalot more, Please do keep up the fantastic jo.
online casino ipad us [url=http://trueonlinecasinos.ooo/]online casino games poker[/url] slot machine for android tablet roulette online no download
gambling sites with paypal [url=http://wowcasinoonline.ooo/]keno online spielen[/url] play casino online uk best blackjack bonus
online casino usa visa [url=http://trueonlinecasinos.ooo/]online play blackjack money[/url] online casino for u s players best casino online canada
online world casino directory super slots [url=http://trueonlinecasinos.ooo/]online casino us customers[/url] online casino games download keno online lotto
So what are you waiting for Makeafree profile now! Now it is quite widespread for girl and males to overtly admit they are occurringadate with someone they met online [url=http://aohurendeisterstr28.cryptom.site]ao huren deisterstr 28[/url] onceaconnection is made you can then go out and do all those things both of you have been emailing, instant messaging, chatting and fantasizing about.
real vegas online instant play [url=http://spaceonlinecasino.com/]best blackjack games usa[/url] the best casino sites online casino pay by paypal
slot games for ipad2[url=http://neoonlinecasino.com/]top gambling payouts[/url] online bingo safe gambling internet machine slot
download casino poker games [url=http://spaceonlinecasino.com/]on line and casino[/url] spielcasino virtual online game casino casino game internet
which online casino [url=http://neoonlinecasino.com/]online casino uk no download[/url] us online bingo reviews online casinos alternate form of payment
online casino slot machines bonus [url=http://onlinecasinoside.ooo/]online casino real money slots[/url] best graphic online casino online european roulette